Norway oo Ra’isul Wasaare Kheyre ka taagereysa dhaqaalaha doorashada 2020 – Somali Top News
Norway oo Ra’isul Wasaare Kheyre ka taagereysa dhaqaalaha doorashada 2020
June 14, 2019 June 14, 2019 Somali Top News	0 Comments
Dowladda Wadanka Norway oo dano badan oo dhaqaale ka leh Soomaaliya aad ula socoto dhaqdhaqaaqyada Geeska Africa ayaa Ra’isul Wasaare Xasan Cali Kheyre u ballan qaaday dhaqaalaha ku baxaya doorashadiisa 2020.
Norway ayaa saaxiib dhaw la’ah Ra’isul Wasaaraha dalka waxaana ujeedkeeda ugu weyn uu yahay iney ka saxiixato heshiisyo maalgashi oo waa weyn kuwaa salka ku haya kheyraadka dalka gaar ahaan Batroolka.
Dowladda Norway ayaa sidoo kale Soomaaliya ku cadaadineysa iney wada hadal ka gasho muranka gardarrada cad ah ee Kenya ku dooneyso Biyaha Soomaaliya si Norway ay u soo saarato Batroolka ku jira halka lagu muran sanyahay oo shirkado dalkeeda laga leeyahay sahmin ay ku sameeyeen.
Norway ma aysan sheegin cadadka dhaqaalaha ku baxaya doorashada 2020 lagu soo saari doono Ra’isul Wasaare Kheyre balse waxey wacad ku martay iney xoogga saareyso sidii uu Madaxweyne u noqon lahaa Kheyre, iyadoo ay xusid mudantahay in Ra’isul Wasaaraha uu wato Basaboorka Norway halka Madaxweyne Farmaajo uu sito Baasaboor American ah isagoo wali ku dhaqma shuruucda Mareykanka.
Norway ayaa sidoo kale Soomaaliya ku riixeysa iney ku biirto Isbadalka Geeska Africa iyadoo Norway ay iska diiday iney kamid noqoto wadamada Midowga Yurub.
Somalitopnews ayaa ogaatay in Kheyre uu helay Ballanqaadkan markii Todobaadkan ay wadanka timid wasiiarradda Arrimaha Dibadda Norway.
By: Tafatiraha Abdiazizh99@gmail.com
← Madaxweyne Farmaajo oo la dardaarmay maamulka Gobalka Banaadir
Kenya said “4 Al-Shabaab militants blown up while planting explosives in Lamu” →
Ciidamada amniga oo Muqdisho ku qabtay Koox dhac u geysata shacabka
Madaxweynaha cusub ee Galmudug oo si rasmi ah xilka ula wareegay
Khasaaraha ka dhashay qaraxyadii shalay oo kordhay